घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू डायोगो जोटा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूरा कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम "जोटा" द्वारा परिचित छ। हाम्रो डियोगो जोटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु भन्दा पहिलेको जीवन कहानी, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन आदि शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ ऊ गोलको लागि आँखा संग सर्वोच्च प्रतिभाशाली छ। जहाँसम्म, केहि थोरैले डायगो जोटाको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
सुरु गरेर, उसको पूरा नामहरू डिओगो जोसे टेक्सेरा डा सिल्भा हो। “जोटा"केवल एक"उपनाम“। डियोगो जोटा उहाँ लोकप्रिय कहलाइनुहुन्छ उहाँ डिसेम्बर १ 4। Of को day औं दिन आमा, इजाबेल सिल्भा र बुबा, पोर्चु, पोर्चुको मसेरेलोसमा जोआकिम सिल्भाको जन्म भएको थियो।
डियोगो जोटा पोर्चुगल पोर्चुगल मासिसेलोस शहर मा आफ्नो भाइ एन्ड्रसे सिल्वा संग बडा भयो। आर्यन सिल्वाले आफ्नो ठूलो भाइको रूपमा समान फुटबलिंग पछाडि पछ्याए।
जोटाको गृहनगर मासारेलोस एक नागरिक प्यारीस हो जुन पोर्टो विश्वविद्यालयले प्रभुत्व जमाउँछ। यो धेरै विद्यार्थी मैत्री कफी पसल, वाइन बार र पेशेवर फुटबल wnabes को घर हो।
एक गर्व, फुटबल प्रेमी र सहयोगी अभिभावकको साथ सुन्दर खेल को लागी एक युवा Diogo Jota मा सम्मिलित गर्न प्राकृतिक बनायो। धेरै युवा फुटबलरहरू जस्तै, जोटासँग साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धी खेलहरू खेल्नको लागि प्रशस्त समय थियो। कुनै समयमा, यो फुटबल खेलको बारेमा थिएन तर क्यारियर किकस्टार्टिंगको बारेमा थियो।
जोटाको फुटबलको लागि उत्सुकताले उनलाई9वर्षको उमेरमा एफसी पोर्टो क्षेत्रको सानो क्लब गोन्डोमारको भालेमा भर्ना भएको देख्यो। उनले क्लबसँग छाप पार्न धेरै समय लिएन। उसको भन्दा पुरानो खेलाडीहरूको बिरूद्ध जितेको कारण जोटा एकदम छिटो पछाडि सर्‍यो।
वर्ष २०१ 2013 मा, जोटाले आफ्नो क्यारियरको विकासको अर्को चरण लिनुभयो। उनी युवा खेलाडीहरूको विकासका लागि प्रतिष्ठा भएका क्लब, पाओस डि फेरेरामा सरे। एक खुसी जोटा आफ्नो युवा क्यारियर फूल को रूप मा बाहिर छोडिएन।
जोटाको U17 प्रबन्धक रुबेन कारभाल्होले महसुस गरे कि उनी विशेष समयदेखि नै विशेष थिए, डियोगो जोटा आफ्नो टीममा सामेल भए। "त्यहाँ एउटा सप्ताहांत थियो जहाँ हामीले दुई पटक क्यान्डल खेलेका छौं" कार्वालहोले भने SAPO Desporto. “डियोगोले खेल सुरु गर्‍यो र हाम्रो लागि तीन गोल गरे। अर्को दिन, उहाँ दोस्रो आधा विकल्पको रूपमा आउनुभयो र अर्को दुई रन बनाए। १०० मिनेट भन्दा बढीको कार्यमा। " जोटाको प्रदर्शनले रुबेन कारभाल्होले उसलाई पेशा गर्न बाध्य तुल्यायो।
फेरि, जोटाले आफ्नो पेशेवर डेबिटमा तुरुन्त प्रभाव पार्नुभयो। यसले उसको युवा गोल स्कोरिंग रेकर्ड सुरु भएको समयलाई चिन्ह लगायो। अब हामी तपाईंलाई यिनीहरू मध्ये केही बताउँछौं।
तपाईंलाई थाहा छ?… जोटा पेसोस डे फ्रेरेराका लागि प्रिमियर लिगा म्याचमा स्कोर गर्न सबै भन्दा कम फुटबल खेलाडी बने। उनी पछि पोर्चुगलको कुनै पनि क्लबको लागि एक गोलमा दुई गोल गर्न सबै भन्दा सानो भए क्रिस्टियानो रोनाल्डो.
2015-16 सीजनमा विशेषता, जोटाले 14 लक्ष्यहरू बनाए र सबै प्रतियोगिहरूमा 10 सहयोग थपे। यो 12 उमेर मा एक सीजन मा 19 लक्ष्य सम्म पुग्न को लागि उसलाई पहिलो खेलाडी बन्यो। अझै पनि एक 19 वर्षीया, जोटा पोर्चुगल शीर्ष उडानमा सबैभन्दा उत्तम जवान खेलाडीको रूपमा मतदान गरिन्थ्यो।
पोर्तुगलको सबैभन्दा ठूलो क्लबहरूको रुचिको बावजूद, डियोगो जोटा स्पेनमा जान पुगे। उनले एटलेटिको म्याड्रिडका लागि साइन अप गरेकी थिईन्, जसले एक वर्षको ऋणमा एफसी पोर्टोमा सामेल गर्न पछाडि पोर्चुगलमा फिर्ता लिन निर्णय गरे। यो पोर्टोमा उनले रुबिन नेभेनलाई भेट्टाए र मित्र दुवै भन्दा राम्रो भए।
तपाईंलाई थाहा छ?… पोर्टो, डियोगो जोटाले लिसेस्टर सिटीको 5-0 विनाशमा आफ्नो पहिलो चैंपियंस लीग गोलको स्कोर गरेर अर्को मील का पत्थरमा खेले। आफ्नो XNumXth जन्मदिन को दिन पछि आने को लक्ष्य संग, उनि एफसी पोर्टो शर्ट मा स्कोर को सबै भन्दा कम पुर्तगाली खेलाडी बने।
Diogo Jota धेरै साथी खर्च गर्न को लागी निर्णय गर्न को लागी उनको सँगी पोर्टो कम्पनिटर पछ्याउने निर्णय गरे पछि रूबेन नेविस "जोखिम"सामेल हुनुहोस् ब्वाँसो जुन त्यो समयमा एक दोस्रो अंग्रेजी विभाजन क्लब थियो।
परिवार स्वीकृत, केहि प्रशंसक अस्वीकृत…
डियोगो जोटाको परिवारलाई उनको सुपर एजेन्ट जोर्गे मेन्डेस द्वारा परामर्श लिइएको थियो जो जोखिम कार्यान्वयन गर्न गो-अण्डर दिइएको थियो। जे होस् भौं क्रोधित पोर्तो प्रशंसकहरूले हुर्काए जसले आफ्नो तातो युवा सम्भावनालाई आफ्नो मातृभूमिमा सबैभन्दा ठूलो क्लब छोडे र मात्र दोस्रो अंग्रेजी डिभिजन क्लबको लागि साइन इन गर्न गए।
"पोर्चुगलमा, धेरै मानिसहरूले मेरो चाल बुझ्न सकेनन्," जोटाले भन्यो र जारी राख्यो। "मलाई मात्र होइन तर नेविस साथै, तर हामी अहिले यहाँ छौं र नराम्रो कुरा गर्ने मानिसहरूले अब बुझ्ने छन्। केवल मेरो परिवार र केहीले मलाई समर्थन गरे र मेरो स्थिति बुझ्यो। "
चालको लागि एक प्रेरणा थियो Nuno। जोटाको वुल्भ्सको त्यो कदम उनका मालिकको साथ मिल्दोजुल्दो छ नुनो एस्पेरिटोटो सान्टो भेडाहरू व्यवस्थापन गर्न रोजगारी भयो। लामो दायरा पास र छोटो मास्टर रूबेन नेविस र पोर्चुगल राष्ट्रवादीहरूको एक ठूलो होस्टमा तल चित्रित चित्र डियोगो जोटाले अंग्रेजी फुटबल र 'नुन क्रांति परियोजना'।
“कहिलेकाँही तपाई कुनै चीज प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले जोखिम लिनु पर्छ। र त्यो समयमा यो गर्न उत्तम चीज थियो। हामी यहाँ आएका थियौं, हामीले क्लबको प्रोजेक्ट देख्यौं, हामीले उनीहरूले खेलेका खेलाडीहरू देख्यौं, त्यसैले हामी च्याम्पियनसिपमा आफ्नो ध्यान लगायौं, प्रिमियर लिगमा केन्द्रित भएर हाम्रो काम गर्यौं। ” जोटाले भने।
डियोगो जोटा पोर्चुगलका ताराहरूको संग्रह थियो जुन च्याम्पियनशिप जित्यो र उनीहरूले पाएका थिए प्रिमियर लिग पदोन्नति। उनले फलफूल मौसममा 17 लक्ष्यहरू बनाए।
प्रिमियर लिगमा खेल्ने क्रममा, डियोगो जोटाले संसारलाई प्रमाणित गरे कि उनी आफ्नो युवा पुर्तगाली पुस्ताको पोर्चुगिज सुपरस्टारको अर्को सुन्दर प्रतिवन्ध हो। लेख्ने समयमा जस्तै, जोटा ईतिहासको पहिलो वुल्भ खेलाडी बनिसकेका थिए प्रीमियरलेग ह्याट्रिक।
यो प्रभावशाली फीचरले उनलाई अर्को पोर्तुगल सुपरस्टारको रूपमा लिईएको छ जुन पछि लिगमा लिगमा हाई-चाल छ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डियोगो जोटाको प्रेमिका को हो?
प्रत्येक महान पुरुषको पछाडि, त्यहाँ एक महिला छ, त्यसैले यो भनाइ जान्छ। एक सफल डिओगो जोटाको पछाडि, रूथ कार्डोसोको व्यक्तिको साथ उसको मानिससँगै चित्रित भएको साँच्चै नै एक ग्लैमरस वेग छ।
दुवै जोटा र रूट सम्भवतः बचपन मिठाईहरू छन् जुन वर्षका लागि सँगसँगै हुन्छन्। यो स्पष्ट छ कि रूट उनको मान्छे पछि भएको छ किनकी दिनहरु भेलाहरु संग सफल हुन को लागी संदेह गरे जा रहेको छ।
दुबै प्रेमीहरू भोल्भरहेम्प्टन शहरमा एक्लै बस्न सुरु गरेनन्। उनीहरूसँग आफ्नो कुकुर लुना तिनीहरूसँग बस्छन् र उनीहरूको जीवनलाई रमाईलो राख्छन्।
जसरी सोक्काले भनेका छन्, आधुनिक खेलमा त्यहाँ कुनै वफादारी छैन, तर त्यसले फुटबलरहरू र कुकुरबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेको छैन। यो चाखलाग्दो कुरा हो कि जोटाले आफ्नो च्याम्पियनशिप विजयी पदक उनको प्रिय लुनालाई दिए जुन उनी पनि एक च्याम्पियन मान्दछन्।
Diogo Jota व्यक्तिगत जीवन जान्न प्राप्त गर्न तपाईंलाई खेलको पिच बन्द आफ्नो व्यक्तित्वको एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। दिलचस्प छ, जोटा र नेविस दुवै पिचबाट बेपरिवार बोस मित्र बनेका छन्।
यो सम्भव छ कि प्रशंसक जोटा खोज्न सक्छ सम्भवतः उहाँलाई र उनको साथी भेट्न सक्छ अरोमा डे पोर्चुगल भोल्टरहप्टनको शहरमा खानेपानी। भोजन पोर्चुगल खानाले साँच्चै उसलाई बनाउँछ र उनको सबैभन्दा राम्रो मित्र घरबाट टाढा छ।
जब तिनीहरू प्रशिक्षण गर्दैनन् भने, दुई पोर्चुगल खेलाडीहरूले एक अर्कालाई टेनिस वा जिम क्रिकेटमा राख्छन्। यी अन्य खेलहरू तिनीहरूका व्यापारमा थपिएका छन् (गार्जियन रिपोर्ट).
नेविस र जोटाले जिममा क्रिकेट खेल्छन्। को लागी क्रेडिट संरक्षक.
उनको सुपर एजेन्ट बारे जर्ज मेन्डेस:
"जोर्गी मेन्डिस मेरो दाहिने हात जस्तो छ," जोटा भन्छन्। "मलाई लाग्छ कि मेरो करियरको प्रबन्ध गर्न उनी भन्दा राम्रो कोही छैन, त्यसैले मलाई चिन्ता गर्न केही छैन - केवल आफ्नो काम गर्नका लागि क्षेत्र। Yआउउट एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व अवलोकन जब तपाईं उनीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उसले मलाई भनिरहेको छ 'तपाईं जहिले पनि अधिक गर्न सक्नुहुन्छ'। मेन्डेज धेरै विश्वस्त छन् र ममा विश्वास गर्दछन् जस्तो म आफैंलाई गर्दछु "।
डायगो जोटाको परिवारले "प्रस्तुतिलाई ठीकै गरेको जस्तो देखिन्छ"जोटा"आफ्नो शर्ट को पछाडिको आफ्नो उपनाम को रूप मा। सत्य यो हो कि, जोटा धेरै कम फुटबलरहरू हुन् जसले त्यसो गर्छन्।
उनको परिवारमा, उहाँ डायओगो नामले व्यवहार गर्नुहुन्छ। अंग्रेजी फुटबल लीगले एक पटक उपनाम प्रतिबन्धित गर्यो “जोटा"अवैध रूपमा र उनको शर्ट मा राख्नु हुँदैन। डियोगोले आफ्नो कानुनी उपनाम प्रयोग गर्नुपर्‍यो। उनले यसलाई "Diogo जे"उनको प्रिमियर लिगमा उछाल पछि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Diogo जोटा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।